दाँत फट्टीएका व्यक्ति हुन्छन् यस्ता ८ विशेषताले भरिपुर्ण ! - समृद्ध नेपाल
मानिसहरुको दाँत फट्टीएको पक्कै देख्नु भएको छ होला। यस्ता मानिसहरु हेर्दा तपाईलाई अजीब लाग्न सक्छ, तर फट्टीएको दाँतको बीचको अन्तरले तपाईको भाग्यसँग सम्बन्धित धेरै रहस्य खोल्छदाँतको बिचमा अन्तर भएका मानिसहरु सुन्दरताको दृष्टिकोणमा राम्रो मानिदैन तर समुद्रशास्त्रको अनुसार यस्तो मान्छे भाग्यशाली हुन्छ। दाँतको बिचमा अन्तर भएका मानिसहरु सुन्दरताको दृष्टिकोणमा राम्रो मानिदैन तर समुद्रशास्त्रको अनुसार यस्तो मान्छे भाग्यशाली हुन्छ।
यस्ता व्यक्तिहरूमा यी विशेषताहरू हुन्छन्१. दाँतहरु बीचको अन्तरले यो देखाउँछ कि यस्ता व्यक्तिहरु धेरै खुल्ला विचार भएका र धेरै खुसी हुने खालका हुन्छन्। यी मानिसहरू आफ्नो मनको कुरा गर्न हि’चकिचाउँदैनन्।२. यदि नोकरी गर्ने मानिसहरुको दाँतहरू बीचको अन्तर छ भने, यी मानिसहरूले भविश्यमा उच्च सफलता प्राप्त गर्नेछन्।
३. समुन्द्री विज्ञानको अनुसार अगाडिको दाँतहरूबीच खाली ठाउँ हुनु बुद्धिमानीको चिन्ह मानिन्छ।४. जुन मानिसहरुको अगाडिको दाँतको बीचमा अन्तर हुन्छ तिनीहरू भित्र विशाल मात्रामा ऊर्जा हुन्छ र उनीहरूले जीवनमा ठूलो स्थान प्राप्त गर्छन्।५. यस्ता व्यक्तिहरु निकै नै फुर्तिला हुन्छन् र निडर हुन्छन्। उनीहरू खुसी रहन चाहन्छन्, त्यसैले उनीहरू समस्याको समयमा डराउदैनन्।
६. जुन मान्छेको दाँतको बीच एक स्थान हुन्छ त्यो मान्छे धेरै गफाडी हुन्छ। तिनीहरू कुनै पनि विषयमा बिहानदेखि बेलुकासम्म बोल्न सक्छन्७. दाँतको बीचको खाली ठाउँले उत्कृष्ट गुणस्तरको संकेत गर्दछ। यी मानिसहरू निश्चित रूपमा खन्चुवा अर्थात खाना खाने सौखिनका हुन्छन्८. जुन व्यक्तिहरूको दाँत बीचको अन्तर हुन्छ ती मानिसहरु वित्तीय मामिलामा धेरै बुद्धिमानी मानिन्छ। यी मानिसहरू सम्पत्ति सम्बन्धी निर्णय गर्दा धेरै सावधानीपूर्वक निर्णय लिन्छन्। त्यसैले यिनीहरुले पैसाको कमिको सामना कमै मात्र गर्नु पर्छ।
पुन लकडाउन सुरु !
जीवनभर नभुल्ने पिडा दिए जव श्रीमान अन्तै गए पछि, भिडियो !
श्रीमानको मृत्यु साइप्रसमा रहेकी श्रीमतीले मुटुसंगै जान्छु भन्दै टिकटकमा भिडियो राखेर गरिन् देह त्याग !
ओली समूहको आमसभाका लागि पखालियो दरबार मार्ग सडक
भूकम्पपछि पुननिर्माण सुरु गरेको दरबार हाइ स्कुल नेपाल सरकारलाइ हस्तान्तर गर्दै !
हार्दिक बधाई !दोहोरी च्याम्पियनको तेस्रो ऐपिसोड कल्पना दाहालले जितिन् !
प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ राख्ने तयारी ! राजधानीको नाम बाकि !
नाफाको एक हिस्सा किसानहरुलाई बाँड्न रामदेवलाई अदालतको आदेश !
अन्तत भुवनले दिए साम्राज्ञीबिरुद्ध कलाकार संघमा निवेदन, कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी अब साम्राज्ञीबिरुद्ध के गर्ला ?
‘एमसिसी चाहिँदैन’ भनेर कार्यकर्ताले नारा लगाए, प्रचण्डले रोके
आज मे १ विश्‍व मजदुर दिवस !